Nandritra izay taona lasa izay, LLC Aksentis dia iray amin'ireo mpitarika amin'ny famokarana ovy voa ao amin'ny Federasiona Rosiana.
Nanomboka ny asany ny orinasa tamin'ny 2012, teo am-piandohana, ny tanimboly dia tsy mihoatra ny 200 hektara azo amidy.
Amin'izao fotoana izao, ny firafitr'ireo faritra nafafy dia misy ovy hekitara arivo hekitara, voly leguminous mihoatra ny telo arivo, ary koa fihodinan'ny vokatra ho an'ny vatan'ny vilona.
LLC Aksentis dia manana tobim-pikarohana sy famokarana matanjaka mba hiantohana ny fihodinan'ny famokarana voa. Ny rafi-pamokarana masomboly voalohany dia ahitana laboratoara fampiroboroboana micro-fitaovana miaraka amin'ny fitaovana maoderina indrindra sy ny trano fonenana teknolojia avo lenta, izay ahafahana mahazo hatramin'ny 650 minitubers isan-taona.
Ny dingana manaraka amin'ny famokarana masomboly dia ny akanin-jaza amin'ny famokarana voa tany am-boalohany, izay manome fiarovana lehibe indrindra ny zavamaniry amin'ny fitaoman'ny zava-maniry biotic sy abiotika. Ireo zana-kazo dia misy rafitra fanondrahana ary voaro amin'ny valan-tsiran'ny aretina. Ny famokarana masomboly ovy elite sy reproductive dia tanterahina amin'ny alàlan'ny haitao mahomby indrindra sy mahomby amin'ny tontolo iainana, izay miantoka ny famokarana betsaka indrindra amin'ny volany ary manao ny asa rehetra amin'ny fotoana mety indrindra.
Ankoatry ny haitao mandroso mandroso amin'ny fambolena ovy voa, izay misy ny fihodinan'ny vokatra, ny fambolena ny tany, ny zezika ary ny fiarovana ny zavamaniry, ny ohatra maoderina indrindra amin'ny milina fambolena eto an-tany, ao anatin'izany ny marika John Deere, Grimme, Lemken sy ny hafa, fanampiana amin'ny fampiharana ny drafitra feno faniriana.
Ny fototry ny fahazoana vokatra avo lenta, ary koa ny famokarana, dia kolontsaina famokarana avo lenta izay misy lafin-javatra lehibe maromaro. Voalohany indrindra - fitantanana mahomby amin'ny famokarana amin'ny dingana rehetra amin'ny hetsika, ary koa mifantoka amin'ny valiny farany, ny fahazoana ny tetika sy ny fizotran'ny mpandray anjara rehetra. Ity sakana ity dia misy koa ny drafitra sy ny fanatsarana, ny famakafakana matetika ary ny asa amin'ireo toerana marefo indrindra, ny fanavaozana mitohy ary ny famolavolana vahaolana vaovao. Ny fanarahan-dalàna amin'ny asa teknika, ny fenitra, ny teny, ny fepetra amin'ny famokarana sy ny fiarovana ny mpiasa, ny fenitry ny fanjakana ary ny adidy amin'ny fifanarahana, ny fepetra takiana ary ny fitsipika, ary koa ny fifehezana ny asa dia manan-danja ihany koa.
Ny lafiny laharam-pahamehana dia ny fiaraha-miasa amin'ny loharanon-karena lehibe an'ny orinasa - mpiasa. Mamorona sy mamolavola ekipa matihanina sy olona mitovy hevitra aminay izahay.
Ho an'izany, mavitrika ny antony manosika ny mpiasa, ny famporisihana ny fandraisana andraikitra, ny fandraisana anjara amin'ny fizotran'ny lohahevitra tsirairay mandray anjara, ny mety hisian'ny fahatsapana ny tena sy ny fanehoana ny tenany ho an'ny tsirairay, ny demokrasia amin'ny fifandraisan'ny mpiasa sy ny mpiasa dia zava-dehibe.
Ho fanampin'ny tombotsoantsika manokana, ny orinasantsika koa dia mihevitra ny tombotsoan'ny orinasan'ny mpiara-miasa sy mpanjifanay, satria ny fiaraha-miasa tsara sy mahomby no fototry ny fifandraisana misy ifandraisany, ary ny fisokafana sy ny fahitsiana no fototr'ireo tetikasa iaraha-miasa maharitra .
Noho izany, ny fomba fanavaozana ny teknolojia sy ny fikambanan'ny asa, ny fanavaozana tsy tapaka ary ny fanatsarana ny teknolojia mifototra amin'ny fitsirihana ny maso, ary koa ny fiheverana mora tohina amin'ireo mpiara-miombon'antoka sy ny mpiasan'izy ireo, dia manome mari-pamantarana avo momba ny hamokarana sy ny kalitaon'ny ovy voa.
Tags: Faritra Nizhny Novgorod
Ny fiotazana ovy dia vita tany amin'ny faritr'i Nizhny Novgorod. 14,3 arivo hektara no natokana ho an'ity voly ity any amin'ny faritra - 7% fanampiny, ...
Tany Malezia, nametaka takelaka izy ireo izay manitatra ny "fiainana" voankazo nandritra ny 14 andro